Araka ny fanadihadian’ny polisy, tovovavy iray tampoho amin’ilay 34 taona no mampaniraka ity farany sy ilay reniny amin’ny fitadiavana vehivavy aondrana. Famitahana no entin’izy ireo mambabo ireo tsy an’asa ka akany vola hikarakarana ny antontan-taratasy. 2 tapitrisa ariary no nalain’izy ireo tamina tovovavy iray ny volana mey teo izay nilazany fa entina hikarakarana azy hiasa any ivelany. Tsy asa velively anefa fa fampanambadiana teratany sinoa no ketrika. Nisy zazavavy nalefan’izy ireo tany Sina mantsy ny taona 2017, nampanantenaina fa hiasa. Fitaizana zaza no tao anatin’ny fifanarahana ary 1.200.000 ariary isam-bolana ny karama. Nony tonga tany anefa, nogiazan’ny vehivavy Malagasy sy Sinoa ny pasipaoro ary ny kara-panondrony. Nitaraina an-telefaonina tamin’ny ray aman-dreniny io tovovavy io. Tsy mbola tafaverina hatramin’izao ary milaza ho mijaly tanteraka, nampanambadiana lehilahy sinoa. Nanao ny taratasy fitarainana tamin’ny mpitandro filaminana ny fianakavian’ny lasibatra ka nanomboka teo ny fanadihadian’ny polisy SCESLFD (Service Central des Enquêtes Spécialisées et de la Lutte contre les Fraudes Documentaries) teo Anosy ka nahatrarana ireto mpianaka teto an-toerana.